Isitolo esidayisa yonke impahla IBhodi Yesekethe Elincane Elikhulu Elincane ICAMTECH PCB
E-mail: info@camtechcircuits.com Ucingo: +86 13713989501 Sixoxa: +86 13713989501
Imvamisa High PCB
I-High Tg Pcb
I-Pcb yethusi elijiyile
Ikhaya > Imikhiqizo > I-Pcb yethusi elijiyile
Ama-PCB wethusi abanzi abonakala ngezakhiwo ezinobukhulu bethusi obusuka ku-105 kuye ku-400 µm. Lawa ma-PCB asetshenziselwa ukuphuma kwamanje (okuphezulu) okukhulu nokwenza kahle ukuphathwa okushisayo. Ithusi elijiyile livumela izingxenye ezinkulu ze-PCB-cross ukuthola imithwalo ephezulu yamanje futhi kukhuthaza ukushabalalisa ukushisa. Imiklamo ejwayelekile kakhulu i-multilayer noma emaceleni amabili. Ngalobu buchwepheshe be-PCB kungenzeka futhi ukuhlanganisa ukwakheka okuhle kwezingqimba nezingqimba zethusi ezijiyile ezingxenyeni ezingaphakathi. Izinzuzo Zokuqina kwe-PCB yethusi:
I-PCB yethusi ejiyile isetshenziswa kabanzi ezintweni ezahlukahlukene zasendlini, imikhiqizo yobuchwepheshe, ezempi, ezokwelapha nezinye izinto zikagesi. Ukusetshenziswa kwe-PCB yethusi ejiyile kwenza ingxenye esemqoka yemikhiqizo yamabhodi we-elekthronikhi ibe nempilo ende, futhi ngasikhathi sinye kuyasiza kakhulu ekunciphiseni usayizi wemishini ye-elektroniki.
I-pcb yethusi yesigcawu yebhodi yesifunda
ukwelashwa Surface: Leard khulula HAL 12 izingqimba Ubukhulu beBhodi: 2.1mm Min Hole Usayizi: 0.3mm Ububanzi bomugqa / isikhala: 0.2 / 0.2mm Okukhethekile: i-resin plug hole, ukujula kokulawula ukujula Isicelo: ugesi
Ithusi PCB IBhodi CAMTECH PCB
Ungqimba: 4 Ububanzi / Isikhala: 0.1 / 0.1mm Ukwelashwa Surface: ENIG Ubuchwepheshe Obukhethekile: Ukulawulwa kwe-Impedance